granulated organic fetiraiza yekugadzira mutsara. - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Granular organic fetiraiza inopa organic chinhu kune ivhu, nokudaro ichipa zvinomera neinovaka muviri uye kubatsira kuvaka hutano ivhu masisitimu. Organic fetiraiza saka iine mikana mikuru yebhizinesi. Nezvirambidzo zvishoma nezvishoma uye kurambidzwa kwekushandisa fetereza munyika zhinji nemadhipatimendi akakodzera, kugadzirwa kwe fetiraiza yemhepo inova mukana wakakura webhizinesi
Granular organic fetiraiza inowanzo shandiswa kusimudzira ivhu uye nekupa mishonga yekukura kwezvirimwa. Dzinogona zvakare kukurumidza kuora kana dzapinda muvhu, dzichisunungura zvinovaka muviri. Nekuti manyowa akasimba efotereza anonwiwa pamwero unononoka, anogara kwenguva yakareba kupfuura mafetiraiza emvura. Iko kushandiswa kwe organic fetiraiza kwakadzora zvakanyanya kukuvara kune chirimwa pachacho uye nevhu nharaunda.
Iko kudikanwa kwekuenderera mberi nekugadzira hupfu hwehupenyu fetiraiza mugranular organic fetiraiza:
Fetiraiza yeupfu inogara ichitengeswa yakawanda nemutengo wakaderera. Kuenderera mberi nekugadziriswa kweupfu fetereza fetereza kunogona kuwedzera kukosha kwehutano nekusanganisa zvimwe zvinoshandiswa senge humic acid, izvo zvinobatsira kune vatengi kusimudzira kukura kwehuwandu hwehuwandu hwezvirimwa uye varimi kuti vatengese nemitengo iri nani uye inonzwisisika.
1. Tsvina yemhuka: huku, ndove yenguruve, ndove yemakwai, kuimba kwemombe, mupfudze webhiza, mupfudze wetsuro, nezvimwe.
2, maindasitiri marara: mazambiringa, vhiniga slag, mufarinya zvakasara, shuga zvisaririra, biogas tsvina, fur fur residue, nezvimwe.
5, sludge: dhorobha sludge, rwizi sludge, firita sludge, nezvimwe.
Granular organic fetiraiza gadzira maitiro: inomutsa - granulation - kuomesa - kutonhora - sieving - kurongedza.
Isu tinopa nyanzvi yehunyanzvi sevhisi sevhisi, kuronga maererano nezvinodiwa nevatengi, dhizaini dhizaini, pane-saiti kuvaka mazano, nezvimwe.
Ipa akasiyana maitiro ekugadzira egranular organic fetiraiza yekugadzira mitsara kusangana nezvinodiwa nevatengi, uye iyo michina iri nyore kushanda.
1. Mutsa uye granulate
Munguva yekusimudzira, komputa ine hupfu inosanganiswa nezvose zvinodiwa kana mafomula ekuwedzera kukosha kwayo kwehutano. Wobva washandisa itsva organic fetiraiza granulator kugadzira iwo musanganiswa muzvikamu. Organic fetiraiza granulator inoshandiswa kugadzira isina-guruva isina zvidimbu zvehukuru hunodzora uye chimiro. Iyo nyowani organic fetiraiza granulator inotora yakavharwa maitiro, hapana yekufema guruva kubuda, uye yakakwira kugadzirwa.
2. Dry uye inotonhorera
Maitiro ekuomesa akakodzera kune wega chirimwa chinogadzira hupfu uye granular solid solid zvinhu. Kuomesa kunogona kudzikisira hunyoro hwezvakakonzeresa fetereza inodzika, kudzikisira tembiricha yekupisa kusvika 30-40 ° C, uye iyo granular organic fetiraiza yekugadzira mutsara inotora chinotenderera chinomesa uye chinotenderera chinotonhorera.
3. Kuongorora nekupaka
Mushure mekuita granulation, organic fetiraiza ma particles anofanirwa kuongororwa kuti awane chinodiwa chemazana size uye kubvisa zvimedu zvisingaenderane nechetere saizi yechigadzirwa. Roller sieve muchina chinhu chakajairwa sieving michina, iyo inowanzo shandiswa kurongedza kweakapedza zvigadzirwa uye yunifomu grading yezvakapedzwa zvigadzirwa. Mushure mekusiya, yunifomu inoverengeka saizi ye organic fetiraiza inoyerwa uye yakarongedzwa kuburikidza ne otomatiki yekupakata muchina inotakurwa nebhandi rinotakura